Fandrirariran’ny fanjakana ny fitakiana : mandrangaranga fitokonana ny mpirakidraharaha fitsarana | NewsMada
Fandrirariran’ny fanjakana ny fitakiana : mandrangaranga fitokonana ny mpirakidraharaha fitsarana
Tratry ny bemarenin’ny fitondrana. Mandrahona hitokona ny mpirakidraharaha fitsarana manoloana ny tsy fihanoan’ny minisiteran’ny Fitsarana azy ireo. “Mampitandrina izahay fa hiroso amin ‘ny fitokonana raha tsy mamaha olana ny eo anivon’ny minisitera. Niandry hatrany ny sendikà nefa mahatsiaro ho voarirariran’ny tompon’andrikaitra hatramin’izao. Manam-petra anefa ny faharetanay miandry izany”, hoy ny filohan’ny sendikàn’ny mpirakidraharaha, Andriambololona Haja. Na izany aza, nilaza ho vonona hatrany ho amin’ny fifampiresahana izy ireo. Efa nanambara rahateo ny minisitra fa misokatra ho amin’ny fifampidinihana, araka ny nambarany. “Miandry ny hoi tohin’ny nambaran’ny minisitra momba ireo tambin-karama samihafa izahay izao”, hoy ihany izy. Notsiahiviny fa efa nisy fifanarahana teo amin’izy ireo sy ny minisitera saingy izao tsy mbola tanteraka izao ka nahatonga azy ireo naka fanapahan-kevitra hiroso amin’ny fitokonana.
Anisan’ny minisitera tsy afaka olana ny eo anivon’ny Fitsarana. Anisan’izany ny fitakin’n y Sendikàn’ny mpitsara (SMM) momba ny fahaleovantenany, ny tsy hitsabahan’ny mpanatanteraka amin’ny raharaham-pitsarana na koa ny baiko midina.
Fanadihadiana lalina momba ny “Raharaha Houcine Arfa”
Eo koa ny fitakin’izy ireo ny hanadihadiana lalina momba ny “Raharaha Houcine Arfa” manoloana ireny fanambarana samihafa nataon’ireo tompon’andraikitra samihafa eo anivon’ny minisitera ireny. Tsy tokony ho vitavita ho azy na ho very anjavony izany. Tahaka izany koa ny mpandraharaha ny fonja. Efa nandrangaranga fitokonana nanomboka tamin’ny fiandohan’ny taona teo momba ny tokony hanatsarana ny tontolon’ny asa ho an’ny fandraharaharana ny fonja. Ny fitaovana tsy ampy na koa ny fotodrafitrasa. Manampy ireo ny tambiny samihafa tokony ho azon’izy ireo. Nipoitra indray koa izany izao ny mpirakidraharaha fitsarana. Tokony hampandinika ity minisitera ity avokoa izany rehetra izany fa tsy vitan’ny fanaovana bemarenina fotsiny amin’izao.